Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao momba ny dia an-tserasera • Raharaham-panjakana • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Other • Olona manao vaovao • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra • Vaovao momba ny dia any Thailandy • Vaovao momba ny fizahantany • Travel Associations News • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao mivalona
Mampitandrina ny amin'ny krizy fizahantany any Thailandy i Skål Bangkok's Wood
Ny faritany Thailand dia mailo amin'ny alàlan'ny COVID-19 Deep Red
Home » Lahatsoratra » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Thailandy » Mampitandrina ny amin'ny krizy fizahantany any Thailandy i Skål Bangkok's Wood
Miharihary izao fa ny fahasimbana ateraky ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Thailand dia voaporofo fa manakiana amin'ny fahasimbana ara-toekarena maharitra maharitra izay miharatsy fa tsy hihatsara.
Miaraka amin'ny fisainana ofisialy ankehitriny momba ny famelana ny indostria, izay mampiasa olona an-tapitrisany any Thailand, hatao sorona; natsipy tany amin'ny amboadia COVID tsy misy fetr'andro ara-bola misy dikany, avela hikely aina ary mety tsy hahomby. Tsy misy fanantenana ny fisokafan'ny sisintany hatramin'ny tapaky ny taona 2021, eny fa na dia ny fametrahana vaksininy eny amin'ny tsenan'ny mpamahana sakafo lehibe aza dia misy ny fisavoritahana sy ny banga amin'ny fitarihana eo amin'ny sehatry ny indostria misy antsika.
Miantso ireo mpitarika ny indostria sy ny governemanta hiteny amin'ny feo iray aho - fadio ireo fampahalalana mifanohitra sy hafatra mifangaro. Feo ofisialy iray ihany. Ny fanambarana rehetra hatao sy ekena avy amin'ity loharano ONE ity.
Andao isika hanana ny Ivotoerantsika manokana Covid-19 Fanapahan-kevitra momba ny fizahantany (CCTSA), notarihin'ny praiminisitra Thailandy Prayut Chan-o-cha ary ireo mpitarika ny fizahan-tany sy fizahan-tany avy amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina.
Raikitra ny fifanjevoana. Talohan'izay dia nanambara ny praiminisitra fa tsy hisokatra ny fizahan-tany alohan'ny tapaky ny taona 2021 nefa samy hafa ny datin'ny MOT & S sy ny TAT.
Amin'izao fotoana izao, ny fidiran'ny mpizahatany any Thailand dia misy quarantine 14 andro. Azoko antoka fa tsy izaho irery no nilaza an'io fa avelao aho hiteny mafy sy mazava fa TSY HANATRIKA ny fampiroboroboana ny fizahan-tany miaraka amina quarantine 2 herinandro. Ankehitriny dia manomboka ampidirina vaksinina, avelao hijery safidy hafa mety hampidi-doza mba hanokafana tsikelikely ny sisintany. Miangavy ny governemanta aho hamela izany. Raha tsy izany dia hitondra antsika hatramin'ny 2025 ny simba ara-drafitra amin'ny toekarem-pizahantsika.
Rehefa mieritreritra ny governemanta Thai raha toa ka hanararaotra izany ary hamonjy ny indostrian'ny fizahantany ary hanokatra indray ny fanjakana na dia endrika fizahan-tany vahiny voafetra sy voafehy aza dia nanambara ny sampana fanadihadiana ara-toekarena ao amin'ny Krungthai Bank fa very mihoatra ny THB 8 miliara ny fanjakana (USD 265m) iray andro amin'ny fidiram-bolan'ny fizahan-tany nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana aprily noho ny sakana tsy mbola nisy toy izany napetraky ny manampahefana Thai amin'ny sidina mpandeha avy any ivelany hatramin'ny fiandohan'ny volana aprily.
Manahy mafy ny tompon-trano. Vitavas Vibhagool, tale mpanatanteraka ao amin'ny Grande Asset Hotels and Property, dia nilaza omaly fa ny trano fandraisam-bahiny enina dia mila manamafy ny taha-ponenana raha mbola mikatona amin'ny fizahan-tany marobe i Thailand. "Tsy mbola niaina tahan'ny olona ambany toy ny 3-4% tahaka an'ity taona ity izahay, satria 70% ny taha mahazatra" hoy Andriamatoa Vitavas.
"Ity krizy ity no henjana indrindra amin'ny tantarantsika, miaraka amin'ny orinasa manolotra vola mitentina 10 tapitrisa baht (332,000 dolara) ho an'ny hotely isam-bolana."
Ny fanadihadiana natao vao haingana dia nilaza fa ny 57% amin'ny fizahan-tany manerantany dia ho ringan'ny areti-mandringana amin'ny faran'ny taona 2020. Any Thailand io tarehimarika io dia hanakaiky ny 80% ary hanasongadinana an'i Bangkok ho toy ny toerana haleha izay hahita ny fihenam-bidy lehibe indrindra eto an-tany. Thailand dia hamoy ny vola THB 2.1 trillion (USD 69.7billion) alohan'ny faran'ny taona amin'ny fidiram-bolan'ny fizahan-tany.
Raha ny fahitako azy dia vola an'arivony tapitrisa baht amin'ny fidiram-bola no tsy nanjavona an'i Thailandn'ireo orinasam-pizahantany efa niorina toy ny hotely, kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ary orinasam-pitaterana ary koa Thai an-tapitrisany maro niasa tamina orinasa niasa ankehitriny.
Skålleague sy GM an'ny trano fandraisam-bahiny Hyatt Regency Bangkok, Atoa Sammy Carolus dia manahy ihany koa amin'ny ho avy, maneho ny ahiahiny amin'ny fanemorana ny fanokafana indray ny firenena amin'ireo mpizahatany vahiny. "Ny lava indrindra andrasan'ny indostria dia ny telovolana voalohany amin'ny 2021 alohan'ny hiharatsy ny sehatry ny fandraisana olona", hoy Andriamatoa Carolus.
"Ny fanokafana dia tokony hatao tsikelikely, atomboka amin'ireo firenena ambany risika toa an'i Vietnam, Singapore, Taiwan ary Brunei," hoy izy. Manaraka ity lisitra ity dia Aostralia, Sina, Nouvelle Zélande, Japon ary Korea atsimo. ”
Tombanana ho 20% amin'ny harin-karena harin-karena faobe ny toekarem-pirenen'i Thailandy. Saingy olo-manan-tantara io. Ny zava-nitranga tamin'ny taona 2020 sy niteraka fahasimbana dia niteraka ahiahy be ihany momba ny fiverenan'ireo mpizahatany vahiny any Thailand amin'ny 2021.
Ny tarehimarika manan-tantara tamin'ny volana janoary 2020 ka hatramin'ny aprily tamin'ity taona ity dia midika koa fa ny tsy fahombiazan'ny fisokafana an'i Thailand amin'ny fizahan-tany vahiny alohan'ny faran'ny taona 2020 dia mety hahitana fihenan'ny GDP Thai maranitra amin'ny telovolana voalohany amin'ny 2021, vanim-potoana izay mazàna manome vahana ny fanjakana. Thailand dia mety tokony ho vonona hiandry hatramin'ny efa-taona alohan'ny fizahan-tany, araka ny efa fantatray taloha, dia hiverina amin'ny 2025.
Thailand dia iray amin'ireo tranga tratran'ny virus coronavirus ambany indrindra eto an-tany. Tranga 4,039 60 fotsiny ary 1,200 no maty. Na izany aza ny governoran'ny Fahefan'ny fizahan-tany any Thailand dia nilaza fa na dia nametra ny fameperana fidirana ho an'ny vondrona sasany aza i Thailand tao anatin'ny roa volana lasa, dia XNUMX monja ny fahatongavan'ireo iraisam-pirenena tamin'ny Oktobra, lavitra lavitra ny telo tapitrisa isam-bolana talohan'ny areti-mandringana.
Nanamafy i Yuthasak fa ny fiverenan'ny coronavirus dia mety hanelingelina ny dia iraisam-pirenena mandritra ny fotoana fohy. Raha ny fanadihadiana nataon'ny birao TAT ampitan-dranomasina 29 dia nilaza ny mpitsangatsangana fa tsy hanao dia lavitra any ivelany izy ireo alohan'ny fahavaratra manaraka.